Laptops ọhụrụ Acer na CES: Swift 7, Nitro 5 na Chromebook ọhụrụ | Akụkọ akụrụngwa
Laptọọpụ ọhụrụ Acer na CES: Swift 7, Nitro 5 na New Chromebook
CES 2018 na-amalite mmalite siri ike. Ọtụtụ n'ime ndị isi ụdị ugbua ugbu a na otu n'ime ihe ndị kasị mkpa technology ngosi na n'ji ngwá electronic. LG gosipụtara ya 4K projector na Taiwanese Acer nwere otu na-eweta kọmpụta ọgbara ọhụrụ ya maka ụdị ndị ọrụ niile.
N'ime akwụkwọ akụkọ ọhụrụ Acer gosipụtara na Las Vegas, anyị ga-ahụ ụdị atọ: Acer Swift 7 (ultrabook), Acer Nitro 5 (maka ndị gamers) na Acer Chromebook 11 (ihe nlere anya maka ulo akwukwo ma obu ndi oru n’aghari). Ma, ka anyị hụ ihe onye nke ọ bụla n’ime anyị na-echere anyị.
1 Acer Swift 7, ezigbo akwụkwọ ntanetị nwere njikọ LTE
2 Acer Nitro 5, a ọhụrụ nhọrọ maka ọtụtụ gamers
3 Acer Chromebook 11, ndị ọzọ nzo na Google si desktọọpụ sistemụ
Acer Swift 7, ezigbo akwụkwọ ntanetị nwere njikọ LTE
Ofdị nke mbụ anyị chọrọ igosi gị bụ ụdị nke ewetara maka oge a. Acer Swift 7 bụbu otu n'ime kpakpando nke mbipụta ikpeazụ nke CES. N'afọ a, ọ na-etolite na nha ihuenyo; tinye njikọ LTE ma mee ka ọ dị gịrịgịrị maka njem dị mfe.
Acer Swift 7 a rutere 14 inch ihuenyo - previousdị nke gara aga bụ sentimita 13,3-, na obere etiti, teknụzụ IPS na mkpebi kacha HD zuru oke. Ọzọkwa, dị ka anyị gwara gị, ihe nlereanya a dị ezigbo mkpa, na-enweta oke ọkpụrụkpụ nke 8,98 millimeters na ihe kachasị mma: batrị ya ga-adịru ọrụ 10, dị ka ụlọ ọrụ ahụ si kwuo na mgbasa ozi ya.
N'aka nke ọzọ, Acer Swift dabere na Windows 10; gị processor bụ 7th Gen Intel Core i8 ma nwee ike ijide 256GB RAM na XNUMXGB nke ohere nchekwa na SSD. Ihe nlere a gha adi na Spen site na Eprel na abali na ego nke 1.699 euro.
Acer Nitro 5, a ọhụrụ nhọrọ maka ọtụtụ gamers
Na nke a anyị na-eche ihu laptọọpụ nke na-anaghị eme ka ọ kachasị ntakịrị oge ahụ; ebumnuche ya bụ ka ọ bụrụ ngagharị ngagharị maka ndị na-amasị egwuregwu vidio. Nke a Acer Nitro 5 bụ laptọọpụ nke nwere ọtụtụ ihe nha atụ: 15,6 sentimita asatọ na diagonal, ya na mkpebi Full HD na teknụzụ IPS.
Ka ọ dị ugbu a, na nke a, Acer ahọrọghị ndị na-arụ ọrụ Intel, kama ọ bụ maka AMD. Iji kọwaa nke ọma, ha na-akụ nzọ n'elu usoro Ryzen yana kaadị eserese AMD Radeon RX560. Ọzọkwa, na nke a, ebe nchekwa RAM nwere ike iru 32 GB. Ọ bụ ezie na ohere ịchekwaa faịlụ dị 512 GB na usoro SSD.
Acer Nitro 5 nwekwara ụdịrị ụdị ụdị akwụkwọ a: ha adịghị gịrịrị, mana chassis ha na-adọrọ adọrọ. Ke adianade do, ozugbo meghere anyị na-achọta a keyboard iberibe na onye ọrụ nwere ike hazie ka ha si chọọ. Echefula banyere igodo ọrụ omenala, ma. Ka ọ dị ugbu a, na ngalaba njikọ anyị ga-enwe USB-C, HDMI, Gigabit Ethernet ọdụ ụgbọ mmiri na "Dolby Audio Premium" na teknụzụ ọdịyo "Acer TrueHarmony". Ọnụahịa nke ihe nlereanya a ga-amalite site na 1.090 euro ga-adịkwa site na Eprel.
Acer Chromebook 11, ndị ọzọ nzo na Google si desktọọpụ sistemụ
Ọ bụ ezie na nkọwa ndị ọzọ gbasara ikpo okwu ọhụrụ mara Fuchsia, ụlọ ọrụ na-aga n'ihu ịkụ nzọ na kọmputa ọhụrụ nwere Chrome OS arụnyere nke, n'aka nke ya bụ dakọtara na ngwa gam akporo. Nke ikpeazụ emeela ka ha bụrụ ezigbo ike n'ụlọ, ụlọ akwụkwọ, ma ọ bụ ọbụna maka ndị ọrụ mkpanaka.
El Acer Chromebook 11 nwere ihuenyo 11,6-inch. HD mkpebi ya (1.366 x 768 pikselụ). Ma buru ibu nke otu kilogram; nke ahụ bụ ịsị, uwe na-adọrọ mmasị na-eyi ụbọchị niile. Ọzọkwa, n'ihi ChromeOS, Chromebook a bụ laptọọpụ na-agbanyụ ma gbanyụọ ngwa ngwa. N'ezie, ị ga-achọ njikọ alwaysntanetị mgbe niile. Ọ bụ ezie na nke a, na ọnụego dị larịị nke anyị na-enwe ugbu a, ọ gaghị abụ nsogbu.
N'ikpeazụ, batrị nke kwadebere Acer Chromebook a ga-anapụta a obodo kwụụrụ ihe ruru awa 10 na-aga n'ihu. Ihe dị ịtụnanya n'ụdị ụdị akwụkwọ a bụ ọnụahịa. Kọmputa a ga-adị n'oge ọnwa Machị na ego nke 249 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Laptọọpụ ọhụrụ Acer na CES: Swift 7, Nitro 5 na New Chromebook
LG na-enye OLED TV nke 65-inch